दक्षिण अफ्रिकामा देखियो कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट, विभिन्‍न देशले लगाए उडानमा प्रतिबन्ध- विश्व - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — दक्षिण अफ्रिकामा कोभिडको नयाँ भेरियन्ट देखापरेको छ । बेलायतका विज्ञहरुका अनुसार उक्त भेरियन्ट अहिलेसम्म देखापरेका कोरोना भाइरसको सबैभन्दा खराब भेरियन्ट रहेको दाबी गरेका छन् ।
यो भेरियन्टलाई 'बी.१.१.५२९' नाम दिइएको छ । मंगलबार पुष्टि भएको यो भेरियन्ट धेरै संख्यामा उत्परिवर्तित भएको बताइएको छ । वैज्ञानिकहरुले कोभिडविरुद्ध बनेका खोप नयाँ देखिएको भेरियन्टमा प्रभावकारी नहुन पनि सक्ने भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
बेलायती स्वास्थ्यमन्त्री शाजिद जावेदले ट्वीट गर्दै भनेका छन्– ‘हामीले नयाँ भेरियन्टको अनुसन्धान गर्दैछौँ । थप तथ्यांकको आवश्यकता छ । हामी अहिले सावधानी अपनाइरहेका छौँ ।' उनका अनुसार ६ वटा वटा अफ्रिकन देशहरु रातो सूचीम राखिनेछन् र आउने यात्रुहरुले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ । दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया, लेसोथो, बोत्सवाना, इसवाटिनी र जिम्बावेका फ्लाइट शुक्रबार राति १२ बजेदेखि आइतबार ४ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ १७:४४
कांग्रेस बाँके क्षेत्र नं १ को सभापतिमा केसी निर्वाचित
मंसिर १०, २०७८ रुपा गहतराज
नेपालगंन्ज — नेपाली कांग्रेस बाँके संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को सभापतिमा ४७ मतान्तरले पोषण केसी निर्वाचित भएका छन् ।
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत शुक्रबार सम्पन्न मतगणनामा केसीले माधवराम खत्रीलाई ४७ मतान्तरले हराएका हुन् । ६०१ मतमा केसीले ३१६ र खत्रीले २६९ मत पाएका छन् । सचिवमा केसी प्यानलबाट खुमबहादुर बस्नेत र खत्री प्यानलबाट जयश्वर पौडेल तथा सहसचिवमा खत्री प्यानलबाट दिपेन्द्र उप्रेती र केसी प्यानलबाट रामबहादुर रावत निर्वाचित भएका छन् ।
क्षेत्रीय कार्यसमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्न बिहीबार भएको मतदानमा ६०१ मत खसेको थियो । ६०५ जना मतदातामध्ये ४ जना अनुपस्थित रहे । निर्वाचनमा र संस्थापनइतरका केसी र संस्थापनका खत्रीको नेतृत्वका दुई प्यानल चुनावी प्रतिस्पर्धामा थियो ।
क्षेत्र नं. २ को क्षेत्रीय सभापतिमा भने वीरेन्द्रबहादुर शाह र रमेश गुप्ताको प्यानलसहित प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । क्षेत्र नं. ३ मा संस्थापन पक्षका नक्की खाँ निर्विरोध विजयी भइसकेका छन् । खाँसहित समानुपातिक तर्फबाट क्षेत्रीय कार्यसमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश ३ (ख) कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।
प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ १७:३०